Kooxda Dawladda hoose ee Hargeysa oo lagu maamuusay casho sharaf. | Hargeysa World~Herald
City Hall NewsKooxda Dawladda hoose ee Hargeysa oo lagu maamuusay casho sharaf.
(Jimce, 07-January-2021)-Masuliyiinta dawladda Hoose ee Magaalada Hargeysa ayaa casho sharaf u sameeyey kooxda kubadda cagta ee dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa. masuuliyiintan oo kale ahaa maayar-ku-xigeenka iyo xoghaya dawladda hoose ayaa sharaftan ku soo dhoweyey dhallinyarada dawladda hoose ku metesha ciyaaraha ka socda magaalo marseedka Berbera.
Kooxda metelaysa dawladda hoose ee ciyaaraha ka socda magaalada Berbera ayaa guulo is-daba jooga ka gaadhay ciyaarihii is-reeb-reebka.
kulankan cashosharafka iyo is xogwaraysiga ee dhexmaray masuuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa iyo kooxda ciyaaraha ku metesha waxay iskaga waraysteen ciyaaraha ay qaybta ka yihiin iyo sidii kooxdu hammiyi lahayd in ay qaadaan koobkan ka socda berbera.